बीमा – Page4– Banking Khabar
एनआईसी एशिया बैंक र अजोड इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले अजोड ईन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको २६६ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा अजोड ईन्स्योरेन्स लिमिटेडको निर्जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा …
सिन्धु विकास बैंक र सगरमाथा इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश प्रसाद जोशी र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्की क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताबाट …
बैंकिङ खबर । नेपाल सरकारले विभिन्न विधाबाट कर तिर्ने १५ संस्था तथा व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ । सातौ राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा बीमा व्यवसाय तर्फबाट यस वर्ष राज्यलाई सर्वाधिक कर बुझाउने कम्पनीको रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अग्रणी भएको हो । …
अजोड इन्स्योरेन्स र कुमारी बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेडबीच बीमा व्यावसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । मंसिर २ गते आइतवार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर …
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी बिकास बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी बिकास बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन.पि. प्रधान र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण राज लामिछानेले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतानुसार महालक्ष्मी बैंकका सम्पत्ती तथा सो बैंकका …
एनआईसी एशिया बैंक र एलआईसी नेपालबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको २६५ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडको जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन् …
बैंकिङ खबर । ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेडका बीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली र एलआईसी नेपालको तर्फबाट का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित घोष दस्तिदारले हस्ताक्षर गरेका …
बैंकिङ खबर । बीमा जोखिम व्यवथापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो । बीमितले आफ्नो जीवन, सम्पति वा दायित्वमा पर्न सक्ने जोखिमको आर्थिक भार बीमकलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै बीमा हो । बीमा बीमित र बिमकका बीच गरिने एक करार पत्र हो …
निर्जला खड्का/बैंकिङ खबर । भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक जोखिमको न्यूनिकरण गर्ने एक प्रकारको सम्झौता नै बीमा हो । विमति र बमकीका बीच कानुनी प्रावधान पुर्याई गरिने एक प्रकारको विधि बीमा हो । बीमा गरिसकेपछि बिमितलाई भविष्यमा आई पर्ने …
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड र शिखर इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश प्रसाद जोशी र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरे । यस …
बैंकिङ खबर । चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष स्व.रामकेशर बोगटीका परिवारलाई एल.आई.सी. नेपालले जीवन बीमाको रकम हस्तान्तरण गरेको छ । शनिबार एक कार्यक्रमबीच एलआइसी नेपालले ४४ लाख रुपैया हस्तानान्तरण गरेको हो । ५८ बर्षीय बोगटीको असोज २३ गते विहान टीकाथलीमा विजुलीको …
बीमा कम्पनीहरुले विदेशमा पनि शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदै
बैंकिङ खबर । बीमा कम्पनीहरुले बिदेशमा पनि शाखा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । बीमा समितिले जारी गर्न लागेको शाखा स्थापना सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले बिदेशमा पनि शाखा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । कम्पनीहरुले विदेशमा …
बैंकिङ खबर । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै बीमा क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपले अघि बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको तीन महिना बितिसक्दा पनि बीमा तालीम इन्स्टिच्युट दर्ता भएको छैन । पहिले नै दर्ता हुने भनिएता पनि चाडपर्वको कारण इन्स्टिच्युट दर्ता प्रक्रियामा केही …
बैंकिङ खबर । बीमा समितिले १६ जना कर्मचारी मागेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट एकजना निर्देशक, उप निर्देशक र सहायक निर्देशक मागिएको छ । समितिले प्रशासन (अधिकृत) तर्फका लागि उपनिर्देशक र सहायक निर्देशक माग गरेको हो । उप निर्देशक पदमा कानुततर्फको …
सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कपिलवस्तुमा मन्द गतिमा अघि बढेको छ । हालसम्म जिल्लामा दुई हजार ७३२ परिवारका १३ हजार ५३९ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य …